Indlu esemaphandleni entle kwiparadesi yendalo - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni entle kwiparadesi yendalo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLiedewij
Kwi-quinta yethu wamkelekile ukuba uhlale kwindlu yethu esemaphandleni ehonjiswe kakuhle enegumbi lokuhlala elithandanayo elinomlilo ovuliweyo kunye nebhedi eyisofa, ikhitshi elihle elinento yonke, igumbi lokulala elitofotofo kunye negumbi lokuhlambela elineenkuni ezitshayo zamanzi ashushu kwishawa. Kwitafile yokutyela kwintente yakho yabucala unokonwabela isidlo sakho. Indlu yethu esemaphandleni entle ikunika umbono omhle kwiinduli ezijikelezileyo.
Le ndlu isemaphandleni ilungiswa ngeliso ibe inezinto ezininzi ezahlukileyo. Le ndlu ibalungele abantu abadala ababini okanye abathathu okanye intsapho enabantwana ababini abancinci. Abanikazi bazenzela uninzi lwayo baza basebenzisa imibala emihle nefenitshala entle. Ikhitshi linazo zonke izinto ozidingayo ukuze upheke ukutya okumnandi: isitovu segesi, ioveni yombane encinci, ibhotile yamanzi ashushu, iimbiza, iipani, iiglasi, izinto zokuhombisa, itafile neebhentshi.
Igumbi lokuhlala lifudumele kwaye lithandana kunye nesofa ekwayibhedi kunye nomlilo ovuliweyo.
Kwigumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini etofotofo uza kufumana iikhabhathi ezininzi zezinto zakho, enye yazo yenziwe ngezandla kwimigqomo yewayini yakudala.
Into eyenza indlu ibe phambili yinkqubo yamanzi ashushu eyenziwe ngamaplanga eshawarini, ekulula kakhulu ukuyisebenzisa ibe zonke iindwendwe zethu ukuza kuthi ga ngoku ziyithandile!
Indlu yethu esemaphandleni ime kwintlambo esecaleni, kodwa yimizuzu eyi-10 kuphela ngemoto ukusuka kwidolophu apho uza kufumana yonke into oyifunayo. Siphakathi kwendalo kwintlambo eneenduli ezisijikelezileyo, umlambo omncinci usasaza emazantsi omhlaba kwaye kukho ingxangxasi encinci entle ekufuphi ukuze singene kuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Liedewij
Siza kube sikhona ukuze sikuncede ukuba kuyimfuneko, singakunika amacebiso ngohambo nokunyuka intaba. Wamkelekile kakhulu kwibhari yethu kunye nevenkile yokutyela encinci kwisayithi. Siyaziwa ngokutya kwethu okusemagqabini, unokuthetha ngokutya okanye iminqweno yokutya, njengabantu abangayityiyo inyama, abangayityiyo inyama, abangayityiyo inyama. Sizama ukuphila ngendlela engonakalisi indalo kangangoko kunokwenzeka. Ngenxa yoko sikhulisa ukutya kwethu okuninzi kwaye sinevenkile encinci enezinto zokutya ezenziwe ekhaya kunye nezinto zokuthambisa.
Siza kube sikhona ukuze sikuncede ukuba kuyimfuneko, singakunika amacebiso ngohambo nokunyuka intaba. Wamkelekile kakhulu kwibhari yethu kunye nevenkile yokutyela encinci kwisayith…
Inombolo yomthetho: 01/2011
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Figueiró dos Vinhos